के तपाईं मलाई राम्रो गुणवत्ता backlinks कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
अरू केहि गर्नु अघि, कुन गुणस्तर ब्याकलिङ्क बनाउनुहुन्छ? सामान्य रूपमा लिइयो, तपाईंको वेबसाइटको वा ब्लगको लिंक प्रोफाईल गुगल द्वारा विभिन्न प्राथमिक कारकहरू प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ, जस्तै लिंक प्राधिकरण, डोमेन उमेर, मिल्दो पाठ एंकर, प्राकृतिक लिङ्क ढाँचा आदि।. तपाईलाई थाहा छ कि राम्रो गुणस्तरको पछाडि कसरी लिने? बस किनभने प्राकृतिक रूपमा निर्माण ब्याकलिङ्कहरू भर्खरै एसईओमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्गीकरण संकेतहरू मध्ये एक हो. त्यसकारण तपाईंले ती बहुमूल्य ब्याकलिङ्कहरू कमाउनका लागि सही ठाउँहरू र सही कार्यहरू जान्नुपर्दछ. र म तपाईंलाई सोशल नेटवर्किंग, लेख मार्केटिंग, मिडिया प्रेस रिलीज, र कागजात साझा वेबसाइटहरु बाट गुणवत्ता ब्याकलिङ्क कसरि प्राप्त गर्न को लागी जाँदैछु. त्यसोभए, ती तल सबैलाई समीक्षा गरौं.
निश्चित रूप देखि, सामाजिक मीडिया को आधुनिक दायित्व संग निर्माण लिंक को लायक छ. र त्यहाँ लगभग एक दर्जन सामाजिक सञ्जाल र मिडिया साइटहरू छन् जुन सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूको सबैभन्दा ठूलो दर्शकहरू जस्तै गुगल प्लस, ट्विटर, फेसबुक आदि जस्ता छन्।. कुरा यो हो कि सामाजिक मीडिया मा लोकप्रिय हरेक अनलाइन प्लेटफर्म मा सामान्यतया एकदम उच्च पृष्ठ रैंकिंग छ. यही कारणले यो आकर्षक अवसर सिफारिश गरिएको छ कि गुणस्तर लिङ्क निर्माणको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रयासको लागी. ध्यान राख्नुहोस् कि सर्वश्रेष्ठ नतीजाहरूको लागि तपाईले पुन: आवधिक पोस्टिङ कार्यक्रम वा मिडिया च्यानल योजना तयार गर्नुपर्छ. यसो गर्दा, तपाईं केवल आफ्नो वर्तमान दर्शकहरू बढ्न सक्नुहुन्न, तर अनियमित र अनूठा सामग्री प्रयोग गरी तपाईंका संभावित ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्नुहुने वास्तविक मूल्य उद्धार गर्दछ, सम्बन्धित छविहरू, इन्फ्राग्राक्सहरू, स्प्रिडसिटहरू, आदिसँग समर्थन गर्दछ।.
यो विधि शायद शीर्ष प्रदर्शन गर्ने लिंक बिल्डिंग रणनीति को सर्वश्रेष्ठ तरीका हो. यहाँ लेख विपणन संग राम्रो गुणवत्ता backlinks कसरी प्राप्त छ - बस सही खोजशब्दहरु को खोज र धेरै उत्कृष्ट लेख तयार. अर्को, तपाईंको सामग्रीमा काम गर्ने सबै भन्दा धेरै सम्मानित लेख डाइरेक्टरीहरूमा पेश गर्न सुरु गर्नुहोस्. त्यस तरिका, 'तपाईंको मुख्य वेबसाइट वा ब्लगमा फर्किँदै लिङ्कहरू समावेश गर्न नबिर्सनुहोस्'. केवल निश्चित गर्नुहोस् कि सबै चीजहरू स्थानमा छन् - एङ्कर पाठहरू र सामाजिक साझेदारी बटनहरू तपाईंको गुणस्तरका लेखहरू भित्र प्रभावकारी रूपमा राखिनुपर्छ.
मिडिया प्रेस रिलीज
यस्ता मीडिया वेबसाइटहरू समाचारसँग सम्बन्धित छन् केही लिङ्कहरू लिने ठाउँहरू पनि - सानो साइटहरू वेबमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ. यो ठूलो मिडिया साइटहरू सधै ताजा सामग्री वा शीर्ष सार्वजनिक रुचिको केहि रोमाञ्चक कथाहरू खोज्दै छन्, तपाइँलाई आवश्यक छ कि तपाईले यो गुणस्तरको लेखलाई तपाईंको मुख्य उद्योग वा आविष्कारको सम्बन्धमा एक ठोस विषय समावेश गर्दछ।. केवल एक आकर्षक शीर्षक र सान्दर्भिक सामग्री सिर्जना गर्ने निश्चित गर्नुहोस् जसले व्यापक लक्ष्य दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्नेछ - र तपाईंले गर्नुभयो.
दस्तावेज शेयरिङ वेबसाइटहरु
कि प्राकृतिक लिंक इमारत को एक अन्य महान तरीका हुनेछ, बाहेक सामान्यतया DoFollow विशेषता संग कि योग्य लायक लिंक. यसबाहेक, प्रायः वा सम्बन्धित स्रोतहरू स्वचालित रूपमा Google को जस्तै प्रमुख खोज इञ्जिन द्वारा विश्वसनीय छन्. त्यसोभए, यो अवसर निश्चित रूपमा एक योग्य, एक जस्तै जस्तो देखिन्छ? यहाँ कागजात साझेदारी वेबसाइटहरूबाट राम्रो गुणस्तरको लिंकहरू कसरी प्राप्त हुन्छ - केवल गुणस्तरको सामग्रीको सही टुक्रा छ (i. ई. , अति बलियो लेखहरू, वा पूर्ण-लम्बाइ पोष्टहरू छैनन्). एकपटक सबै तयार भएपछि, तपाईले भर्खरै भर्खरै तपाइँको वेबसाइट वा ब्लगमा इशारा गर्ने ब्याकलिंक छोड्नु पर्छ Source .